11 November 2019 nke Dubai Tram na 5. na-eme ememme ncheta ncheta ncheta ya, wayszọ Ahịa Okporo andzọ na reportedgbọ njem (RTA) mere ka a mata na ụgbọ ala bụ ihe dị mkpa na sistemụ ụgbọ okporo ígwè na netwọsị njem njem ọha. Thezọ ụgbọ ala bụ ezigbo ntọala maka ndị ọbịa na ndị njem na-abịa Dubai [More ...]
Onye ọrụ mmepụta ihe nke Turkey 5-10 nde mbupụ ka m ga-ebuga, M ga-emepụta ọrụ na obodo na ntinye aka otu ijeri euro na mba ahụ na-aga ndị mba ọzọ. Na 2009, nro maka ugbo ala ụgbọ ala nke 32 ejidere na İzmir na enweghị onyinye mpaghara ọ bụla na [More ...]
Turkey Railway Machines Industry Inc. ọhụrụ ọgbọ ibu ugbala enye oké uru na ọrụ na-eduzi uche nke ndị mba ọzọ na ụlọ ọrụ ndị na TÜDEMSAŞ. Na Germany, Hansewaggon, azụmaahịa azụmahịa ụgbọ ala, na-adọta mmasị nke ụlọ ọrụ mba dị iche iche kemgbe mmepụta ya. [More ...]
Abdullah Peker, Onye isi oche nke Hak-Union nke ationgbọ njem na ndị na-arụ ọrụ okporo ụzọ, kwupụtara na ekwesịrị ịbawanye maka itinye ego maka TÜDEMSAŞ na mmemme ego 2020 nke afọ ma ọ bụghị TÜDEMSAŞ enweghị ike imepụta ihe. Ndị ọrụ ụgbọ njem Hak-Sen Onye isi oche Abdullah Peker na akụkọ ya [More ...]
Ntughari nke Cistern Wagons nke Ministry of National Defense ga-eme na TÜDEMSAŞ. Arif Koyuncu, Onye isi nke mmanụ ụgbọ mmiri na arụ ọrụ nke NATO POL Facilities (ANT) nke so na Minista Nchebe Mba (MSB) na Ilhan Maraşlıoğlu, Onye isi oche, letara Mehmet Başoğlu, onye isi njikwa nke TÜDEMSAŞ [More ...]
Companieslọ ọrụ mba ụwa na-eduzi ngalaba ụzọ ụgbọ oloko zutere na RailExpo 2019 na Kiev, Ukraine. Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) General Director Mehmet Basoglu, Isi nke Quality Control Department Zühtü Çopur na n'ụgbọala Manufacturing Factory Manager Feridun [More ...]
Na Turkey, obodo ahụ nso gụnyere ngwa ngwa, ẹkenịmde na-adaba adaba na ala njem maka inye ohere nke TCDD enyemaka nke Anatolia DMI mere mmepụta site TÜVASAŞ National Train Set Usak ule ụgbọala Governor GỤKWUO Kocabıyık òkè. Site Ufọk Usak, [More ...]
Turkey Locomotive na Engine ụlọ ọrụ dị ka (TULOMSAS), ndị German ibu Volkswagen ụgbọala-emepụta ọhụrụ factory kpọmkwem ndị e hiwere na Turkey na-atụ anya na-ebu "abụọ-storey n'ụgbọala" prototype oyiyi, oge mbụ na HaberTürk ... a na Turkey, TULOMSAS ' Ndị ọrụ injinia Turkey, ndị na-arụ ọrụ teknụzụ dị na Eskişehir [More ...]
German ibu Volkswagen ọhụrụ factory na Manisa ga-eweta kpọmkwem mgbe na-eme preparations maka iga site okporo ígwè nke akụkụ ụfọdụ nke Turkey, otu ihe dị mkpa ọmụmụ pụtara ọzọ na ga-eme ka a ọhụrụ olu a nke. Turkey Locomotive na Engine ụlọ ọrụ dị ka (TÜLOMSAŞ) [More ...]
Mgbe Touax General Manager Jerome Le Gavrian letara TUDEMSAŞ na 5 Septemba, taa ndị ọrụ aka nke ụlọ ọrụ Touax ga-ahụ maka ubi mmepụta nke TUDEMSAS na 90 ụkwụ nke Sgmmrs ụdị ụgbọ agha nke TUDEMSAS mepụtara - mpaghara nzuzo. [More ...]
Hellọ ọrụ Helrom, nke na-ebugharị na Europe na North America, na Nurettin Yıldırım, onye nwe ụlọ ọrụ Gökyapı, gara Mehmet Başoğlu, onye isi njikwa nke TÜDEMSAŞ, n'ọfịs ya. [More ...]
GBS ụdị ụgbọ ala emechiri emechi, nke na-abaghị uru na ogige ụgbọala TCDD, na-atụgharị gaa n'ụdị akpa akpa Lgs site na TÜDEMSAŞ ma weghachite akụ na ụba. 2014, otu n'ime ugbo ala nke TÜDEMSAŞ R & D otu mere, malitere mgbanwe na Wagon Repair Factory na 218. [More ...]
Site na ya 11 puku ụgbọ mmiri na-ebu ibu, Touax, ụlọ ọrụ mgbazinye kasịnụ nke abụọ nke Europe, gara TÜDEMSA discuss iji kpoo mkpa nke ụgbọ ga-eji ụgbọ njem mba dị iche iche. Touax bụ ụlọ ọrụ mba ụwa, nke dị na Paris ma bụrụ ọkachamara n'ụgbọ okporo ígwè. [More ...]
Tüpraş na-ebugharị Locoo ebumnuche Si Stlọ Ọrụ Switzerland Stadler! .. Ọ bụ na Anyị enweghị Ngwakọta ngwakọ nke Mba?
Tupras, Turkey kasị ulo oru enterprise, Switzerland Stadler, 7 Total bịanyere aka nkwekọrịta maka zuo nke locomotives EURODUAL ụdị. Ọ bụ ihe nwute nye ndị na-emepụta ala m. Agbanyeghị, ọdụ ụgbọ oloko ndị a na ụlọ ọrụ Eskişehir Tülomsaş nwere ike ịmuta ngwa ngwa. N'ebe a na Tülomsaş [More ...]
Vegbọala ụgbọ ala na nke mba ụgbọ ala
Durmazlar 60 Green City Light Metro Vehicle nke Bursa mepụtara ma na-eje ozi na Obodo Bursa, Bozankaya 31 iberibe nke Tals mba ika nke Kayseri mepụtara ma na-eje ozi na Kayseri, Durmazlar Mepụtara na ije ozi na Bursa [More ...]